PressReader - Ilanga: 2018-10-25 - Inyakazisa omasikandi iSoweto Derby
Inyakazisa omasikandi iSoweto Derby
UKhuzani noDSD banethemba ngezinkunzi zabo
Ilanga - 2018-10-25 - News - SENZO SOKHELA senzos@ilanganews.co.za
KUNYAKAZE nosondonzima bakamaskandi ngomdlalo we-Absa Premiership phakathi kwezinkunzi zaseSoweto, i-Orlando Pirates neKaizer Chiefs, ezizobhekana eFNB Stadium, ngoMgqibelo ngo15h30.
Lo mdlalo uthathwa njengomkhulukazi e-Afrika yonkana njengoba uheha izinkumbi zababukeli uma ugijinywa. Kuma cishe yonke into uma kubhekene lezi zinkunzi sazeSoweto. Nabaculi bakamaskandi ngokunjalo bathi bashiya kwasani uma kuzobhekana la makilabhu.
UKhangelani “DSD” Mhlongo, ongumlandeli wokuqina weChiefs, uthi noma kanjani iKhosi liyadlula kulo mdlalo futhi ngembudlu yamagoli.
“Engifuna ukukucacisa wukuthi AmaKhosi kawakaze aguqe, kunalokho azokube ehleli phansi ecaba amathambo ePirates azokube esogqokweni. Ngizwa ekhaleni ukuthi lo mdlalo sizowunqoba ngembudlu yamagoli, kuzokuba wu-3-0. Kangifuni ukusho ukuthi ngobani abazohlohla amagoli ngoba bangaze baqaphe, mabalinde nje bona bazozwa,” kusho uDSD.
Limbuza leli phephandaba uku- thi uma ezibuka ezakhe ngale sizini, zinalo yini ithuba lokunqoba okuthile, uthe: “Uma uyiKhosi ithemba kawulilahli, noma kanjani kukhona esizokunqoba. Into emqoka nje wukuba sinike umqeqeshi ithuba enze umsebenzi wakhe ngendlela noma kanjani kukhona esizokuthola.”
UKhuzani “Ndlamlenze” Mpungose, ongumlandeli wokuqi- na wePirates, uthi ngeke behlulwe yikilabhu elinyalelwe ngabadlali.
“IChiefs inenqwaba yabadlali abalimele ngakho-ke kangiboni nje izosinika inkinga. Lo mdlalo uma ungaphelanga zibambene ngo-1-1, noma kanjani kuzonqoba iPirates. Uma u-Augustine Mulenga ewuqalile umdlalo noma kanjani uzolibeka enethini, uyingozi lowaya muntu, uyalishaya igoli. Bangamkhohlwa noJustin Shonga ngoba naye uma edlalile uzolihlohla elakhe,” kusho uKhuzani.
Mayelana nethuba lokunqoba inkomishi kweBucs ngale sizini, uthe: “Ukunqoba kwethu izinkomishi kulele kumqeqeshi. Sinabadlali abaningi abahle, inkinga nje wukuthi umqeqeshi ubuye asimangalise ngokushintsha njalo isikimu. Buka nje emdlalweni odlule neChippa United besilindele ukuthi uzoqala ngoVincent Pule, wavele wamqalisa ebhentshini.
“Uma nje engaba nesikimu esiqondile, kangangibazi ukuthi singakunqoba okuthile ngoba nezimbangi zethu kwazona zisabamba ziyayeka.
“IMamelodi Sundowns nje engompetha beligi, isadidekile kuyabonakala ukuthi kuzwelile ukuhamba kukaPercy Tau noKhama Billiat. Ithemba kalibulali, sizothola okuthile ngale sizini nginalelo themba,” kusho uKhuzani.
Azobe ehleli phansi ecaba amathambo ePirates azokube esogqokweni.
UKhangelani “DSD” Mhlongo
UKhuzani “Ndlamlenze” Mpungose